सलमानको फिल्मप्रति हिन्दुवादीको आपत्ति, हिन्दु समुदायको भावनामा ठेस पु-याएको आरोप | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सलमानको फिल्मप्रति हिन्दुवादीको आपत्ति, हिन्दु समुदायको भावनामा ठेस पु-याएको आरोप
सलमानको फिल्मप्रति हिन्दुवादीको आपत्ति, हिन्दु समुदायको भावनामा ठेस पु-याएको आरोप
मंसिर ११ गते, २०७६ - १५:२३
काठमाडौं । सलमान खानको फिल्म ‘दबंग ३’ रिलीज हुनु अगावै विवादमा फसेको छ । फिल्मप्रति हिन्दु जनजागृति समितिले आपत्ति जनाएका छन् । फिल्मको टाइटल गीत ‘हुड दबंग दबंग’ले हिन्दु समुदायको भावनामाथि ठेस पु-याएको उनीहरुको आरोप छ ।
हिन्दू जनजागृति समिति महाराष्ट्र तथा झारखण्डका संयोजक सुनली घंवातले फिल्मको गीतमा हिन्दु ऋषिमुनिहरुलाई आपत्तिजनक अवस्थामा देखाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘दबंग फिल्मको गीतमा ऋषिमुनिलाई सलमानको साथ आपत्तिजनक तरिकाबाट नाच्दै गरेको अवस्थामा देखाइएको छ, यसले हिन्दु समुदायको धार्मिक भावनामाथि ठेस पु-याएको छ ।’
उनले गीतमा हिन्दु ऋषिहरुलाई तुच्छ रुपमा देखाइएको भन्दै विरोध गरेका छन् । सलमानले मुश्लीम या इसाईका गुरुलाई यसरी नचाउन सक्छन् भनि प्रश्न पनि गरेका छन् । जनगागृति संगठनले केन्द्रिय फिल्म बोर्डलाई पनि फिल्मलाई रोक्न आह्वान गरेको छ ।
‘दबंग ३’ को टाईटल गीतमा सलमान ऋषिमुनीको साथ नदी किनारामा नाच्दै गरेको अवस्थामा देखिएका छन् । भिडियोमा सलमानले ब्रह्मा, विष्णु र शिवको कपडा पहिरिएका मानिससँग आशीर्वाद लिएको देखिएका छन् ।
फिल्म यसअघि पनि विवादमा फसेको थियो । फिल्म शुटिङको समय वायरल भएको तस्बिरमा शिवलिंगलाई अपमान गरिएको छ । शिवलिंगलाई खुट्टाले कुल्दै काम गरिएको अवस्थामा एक व्यक्ति देखिएका छन् ।
यसअघि भाजपा विधायकले रामेश्वर शर्माले हिन्दु समुदायमाथि अपमान गरिएको आरोप लगाउँदै एफआईआरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तस्बिरको आधारमा फिल्मको निकै विरोध पनि भएको थियो ।
आगामी २० डिसेम्बरमा रिलिज हुने फिल्ममा सलमान खानसँगै सोनाक्षी सिंन्हालगायतका चर्चित हस्ति आउँदैछन् ।
मंसिर ११ गते, २०७६ - १५:२३ मा प्रकाशित
देशभर १५ सय बढिको कोरोना परीक्षण, ११३ जना आइसोलेसनमा
काठमाडौं । नेपालमा अहिलेसम्म १५ सय २९ जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता...
बाबुराम भट्टराई र प्रदीप गिरीले सुरु गरेको अभियानप्रति मन्त्री योगेश भट्टराईले किन जनाए आपत्ति ?
काठमाडौं । समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस नेता प्रदिप गिरिलगायतले कोरोना महामारीविरुद्व...
गलत हेडलाईन राखेर प्रचार गरिएको भन्दै कांग्रेस नेता महतद्वारा आपत्ति, चुनावको माग नगरेको प्रष्टोक्ती
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो भनाईको गलत अर्थ लगाउने गरि हेडलाईन...
कोरोना देखिएसँगै चीनबाट साढे चार लाख मानिस अमेरिका भित्रिएको खुलासा
काठमाडौं । अमेरिकामा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै गएको छ । कोरोनाबाट संक्रमित हुने र मर्नेहरुको...
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या विश्वभर आक्रामक रुपमा बढ्दो छ । हालसम्म १२ लाखभन्दा बढि...
भारतमा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या १०९, आइतबार मात्रै ४ जनाले ज्यान गुमाए
काठमाडौं । भारतमा कोरोना भाइरसको कारण आइतबार मात्रै चार जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भारती सञ्चार माध्यम...
धुलिखेल अस्पतालमा आजदेखि कोरोना परीक्षण शुरु
स्वास्थ्य सामग्री प्रचलित कानूनअनुसार नै खरिद गरिनेछ : नेपाली सेना
उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने चार सय ५२ महिलासहित एक हजार ८०० जनालाई कारवाही
नोबेल साकोस साहित्य संस्थामा २१ जनाले गरे रक्तदान
आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुद्रा चामल बिक्री खुला
कोरोना सङ्क्रमित ६५ वर्षीया वृद्धा भन्छिन् : आत्तिएर हुँदैन आत्मबल बलियाे चाहिन्छ
आजदेखि कैलालीसँग सीमा जोडिएका सबै झोलुङ्गे पुल बन्द
कञ्चनपुरको सङ्क्रमितलाई नियन्त्रणमा लिने सशस्त्रको टोली सेल्फ क्वारेन्टाइनमा